Jabulela i-Fair Rho! - I-Airbnb
Jabulela i-Fair Rho!
Cesate, Milano, i-Italy
Ikamelo e-iyunithi yokuqasha ibungazwe ngu-Sabrina
Ifulethi elithokomele endaweni ethule neluhlaza emaphethelweni eMilan, eseduze ne-Rho (imizuzu engu-15 ngemoto) .Izithuthi zomphakathi ezixhumeke kahle, ziqeqesha njalo ngemizuzu engu-15 ukuya eMilan Cadorna naseBovisa.
Uma uthanda imibala yendawo yethu yokuhlala iyindawo ekufanele, ngipenda ukuze indlu yami iphathwe imibala ngezandla zami! Efulethini kukhona ukufinyelela kwe-WiFi 24h, kukhona nomshini wokuwasha, isomisi, i-toaster, i-juice extractor, i-juicer, ifakwe kabusha, umsakazo, i-dvd cd player, i-iron, i-grill, i-blender.
Ngingakwazi ukuhlalisa umuntu oyedwa noma izithandani.
4.65 · 50 okushiwo abanye
Ngikhethe le ndawo ngoba izungezwe imvelo futhi ithule, kodwa iseduze neMilano… lapho ngijwayele ukusebenza khona… Kuthatha imizuzu emibili ukufika “eParco delle Groane”, ipaki elikhulu eliluhlaza… Ngithanda ukugijima nokugibela ibhayisikili kakhulu. , futhi lapha kuphelele ngempela kulokho!
Ukudla kwasekuseni kufakiwe, uma kudingeka. Angihlali ngisekhaya, kodwa njengoba ngisekhaya ngingathanda ukusebenzelana nezivakashi zami ukuze ngizenze zikhululeke, ngitholakala ngezinhlobo ezihlukahlukene zolwazi.
Hlola ezinye izinketho ezise- Cesate namaphethelo